Izincwadi ezinconyiwe ezivela kuningi lababhali
Izincwadi ezinhle kakhulu zababhali abaningi.
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zika-Anabel Hernández
Ubuntatheli bungaba yizincwadi lapho amandla ezindatshana zawo, amarekhodi noma imibiko igcina ikhipha ukulandisa endaweni yansuku zonke, yeqa lowo mngcele ukuya ohlangothini lwasendle. Icala elisobala ngelika-Anabel Hernández García nendlela yakhe yokuzungeza umhlaba ongaphansi komhlaba ...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zesibhakela
Masibhekane nakho, ngenxa yochungechunge lwefilimu ye-Rocky, isibhakela sithathe leso siqephu sezinganekwane kuphela esingasinikeza kunoma iyiphi ingxenye yempilo. Kodwa ngale kwalokho uSilvester Stallone washaywa inkulungwane nokukodwa lapho agcina ephumelele khona ngemuva kokuqabula ...
3 izincwadi ezinhle kakhulu zika-Ian McEwan
Omunye wababhali besiNgisi abaziwa kakhulu namuhla ngu-Ian McEwan. Ukukhiqizwa kwakhe okuyinoveli (ubuye wavelela njengombhali wesikrini noma umbhali wemidlalo yokudlala) kusinikeza umbono wokuphumula womphefumulo, nokuphikisana kwawo nezigaba zawo eziguquguqukayo. Izindaba ezimayelana nobuntwana noma uthando, kepha ezikhathini eziningi ...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zezomnotho
Yeka injabulo engayithatha esivivinyweni sami sokuqala sasekolishi. Kwakumayelana nesihloko sezomnotho futhi phakathi kweminye imibuzo engikhumbulayo ukuthi sacelwa ukuba senze i-dissertation mayelana nokungenelela kwe-macroeconomic kaHelmut Kohl eJalimane (impela umbuzo wawugxile kakhulu ekudutshulweni, kodwa lokho ...
Izincwadi ezi-3 eziphezulu zikaDeborah Levy
Ezikhathini zamuva nje, u-Deborah Levy uhamba phakathi kokulandisa kanye ne-biographical. Ukuzivocavoca okubhaliwe njenge-placebo yamanxeba esikhathi, ukudelela kwempilo kanye nokusula ngempoqo okungokwemvelo. Kodwa yilokho okumangazayo kuleso sigaba sokukhula lapho iqala khona ukubala ...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zikaJuan Francisco Ferrándiz
Ngihlanganisa u-Juan Francisco Ferrándiz eningini labaxoxi bezindaba bamanje abanoveli yomlando eyenziwe e-Spain. Ngibhekise kubabhali bezizukulwane ezimbalwa ezinjengoChufo LLorens, Luis Zueco noma uJosé Luis Corral. Ngoba zonke ngendlela yazo, enengxenye eningi noma encane yomlando noma inganekwane, si...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zika-Antonio Escohotado
Uma kungathiwa zazisekhona izazi zefilosofi ekhulwini lama-XNUMX, kwaba ngenxa ye-Antonio Escohotado enqume kokubili ukwenza ithiyori futhi idonsele i-empiricism ye-metaphysical ngokuzihlola ekujuleni. Yebo, futhi izidakamizwa ngokusebenzisa. Konke ukufeza leyo lucidity ye-kaleidoscopic ejwayelekile yama-psychedelics ...
Izincwadi ezi-3 ezihamba phambili zikaTamara Tenenbaum
Lapho umuntu ethola ababhali abafana noSchweblin noma iTenenbaum, kubonakala sengathi uye wasondela endabeni yaseJalimane. Kepha bobabili uSamanta noTamara, amagama andulela lezo zibongo, angababhali base-Argentina abasisondeza ekulandiseni kwabo ngeBuenos Aires vitola, ukuze baphinde basebenzise izincwadi zase-Argentina nge ...
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi159 Okulandelayo →